Iincwadi ezi-5 eziPhambili zezeMidlalo kwi-Intanethi: Isikhokelo kwiiNdawo zokuBheja kwezemidlalo eMelika - Ezintsha
Eyona Ezintsha Iincwadi ezi-5 eziPhambili zezeMidlalo kwi-Intanethi: Isikhokelo kwiiNdawo zokuBheja kwezemidlalo eMelika
Iincwadi ezi-5 eziPhambili zezeMidlalo kwi-Intanethi: Isikhokelo kwiiNdawo zokuBheja kwezemidlalo eMelika
Namhlanje, zininzi iincwadi zemidlalo ezikwi-intanethi onokukhetha kuzo, kodwa akusoloko kulula ukufumana ezinokuthenjwa nezinokuhlawulwa ngokukhawuleza.
Ke kule posi, sidibanise uluhlu lwee Iincwadi zezemidlalo ezilungileyo ngodidi. Siza kukuxelela ukuba zeziphi iincwadi zezemidlalo ezilungileyo kumdlalo ngamnye, kwaye zeziphi ezona ngxaki kunye nemigca.
Dibana nombhali: Njengababhuki abaziincutshe kangangeminyaka engama-20, mna nomntakwethu besibala ukubalwa kwamanani kunye nokubeka amaxabiso okoko nje ukubakho kweziza zokubheja kwezemidlalo. Ukuphonononga ezinye iincwadi zezemidlalo ezifana nale, khangela iBlogworth.com blog.
Iindawo ezi-5 eziBalaseleyo zokuBheja kwezemidlalo kwi-Intanethi
Ukukhetha okuthe kratya: Bovada
Iziphumo kunye neMigca egqwesileyo: MyBookie
Eyona Bhonasi yokuSayina: Ukubetha
Imidlalo emnandi kakhulu: Incwadi yezemidlalo yeDK
Eyona Bhonasi yokunyaniseka: Ukubheja365
1. Bovada -Iincwadi zeMidlalo eziPhambili kwi-Intanethi eMelika
Ukuba into oyifunayo yeyona ndawo yokubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi ekubonelela ngeyona nto ilungileyo kuyo yonke imidlalo, kubandakanya i-UFC, NHL, NBA, NFL, kunye ne-NCAA, emva koko ungajongi incwadi yezemidlalo iBovada. Ngamava eminyaka elishumi, inakho konke ukuthatha amava akho okubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi ukuya kwiindawo eziphakamileyo ezingathethekiyo.
Ezinye izibonelelo zeBovada ezibalaseleyo:
Uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo kwimidlalo, kubandakanya ikhasino, igumbi le-poker, incwadi yomdyarho kunye nencwadi yezemidlalo.
Uhlobo olungenakuthelekiswa nanto lwezinto zokubheja ezikhuphisana kakhulu.
Ukhetho olufanelekileyo lokukhetha olukhawulezayo, oluthembekileyo nolukhuselekileyo.
Yamkela i-BTC kwaye ihlawule ngokukhawuleza
Ibhonasi: Iipesenti ezingama-50 ukuya kuthi ga kwi-250 yeedola
Amakhonkco : Ibhonasi yamkelekile
Mbini. MyBookie -Incwadi yezemidlalo eneZiphumo eziBalaseleyo kunye neMigca
Ukusukela oko yaphehlelela umva umva ngo-2014, iMyBookie izakhele igama njengencwadi yezemidlalo ekwi-intanethi ethembekileyo nejolise kubathengi. Ukungahambelani kwayo kunye nemigca yayo ingaphezulu kuninzi lwezinye iisayithi zokubheja ezemidlalo ezinikwayo, oko kuthetha ukuba awuyi kuzisola ngokuthembela ngemali yakho.
Isishwankathelo, ukulunga kwale ncwadi yezemidlalo ikwi-Intanethi kubandakanya:
Uyilo olugqwesileyo olulungiselelwe zombini iselfowuni kunye needesika.
Ukuphulukana neebhonasi kunye nokwenyusa kusasazekile unyaka wonke.
Iimpawu zokhuseleko oluphezulu kunye nokukhethwa okuqinileyo kweendlela zebhanki ezihlanganisiweyo.
Ibhonasi: Iipesenti ezingama-50 ukuya kuthi ga kwi-1,000 yeedola
3. Ukubetha -Ibhonasi ebalaseleyo yokuSayina yayo nayiphi na incwadi yezeMidlalo
Lo mphathi wokungcakaza usekwe kwi-Intanethi eMalta ebekwishishini lokudlala ukusukela ngo-2006, oko kuthetha ukuba uyazi kakhulu malunga nokuqhuba incwadi yezemidlalo ephumeleleyo. Impumelelo yayo zizinto ezimangalisayo ezihamba kunye nokuzinikezela kwayo ekunikezeleni awona mava mahle kubathengi kuyo yonke imimandla esebenza kuyo.
Izibonelelo ezibalaseleyo zokukhetha iBetway ngaphezulu kwezinye iisayithi zokubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi zibandakanya:
Uluhlu olukhulu lokukhetha ukubheja, kubandakanya ukubheja kwikamva, ukuhlala kwimidlalo yokubheja, ukudlala, njl.
Ukunikezela ukungahambi kakuhle kwiimarike zemidlalo zasekhaya nakwamanye amazwe.
Uyilo olukhazimlisiweyo kugxininiso kulungelelwaniso lweqonga lomnqamlezo.
Ibhonasi: Iidola ezingama-30 zamahhala kunye ne-100% ukuya kuma-250
Zine. Uyilo -Eyona Midlalo miBalaseleyo yokuBheja kwi-Intanethi
Eyaziwa kakhulu ngeendlela zayo zokubheja ezingafaniyo kunye neebhonasi zengqondo kunye nokukhushulwa, i-DraftKings ikhuphuke ngokukhawuleza ukuba ibe yenye yezona zinto zibalulekileyo zokubheja kwezemidlalo eMelika. Njengokuba oko kungenjalo, incwadi yezemidlalo ekwi-intanethi yenze umsebenzi omkhulu ekuyileni amava amnandi kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuwacebisa kwabanye abathanda ukubheja kwezemidlalo.
Ezinye zezona zinto zibalaseleyo zale ncwadi yokubheja kwi-Intanethi zibandakanya:
Uyilo olwenziweyo kunye noyilo olunomdla kakhulu kwiqonga.
Uluhlu olukhulu lweemarike zokubheja kunye neendlela zokukhuphisana kakhulu.
Unikelo olunoburharha lweebhonasi kunye nokunyuselwa, kubandakanya neskimu sokunyaniseka.
Ibhonasi: $ 100 Ukubheja simahla kunye neepesenti ezingama-20 ukuya kuthi ga kwi-1, 000 yeedola
5. Ukubheja365 -Eyona ndawo yokuBheja kwezemidlalo yeyonaNtlawulo ekhawulezayo
Ngelixa inokuba ngumngeneli omtsha owanda ngokukhawuleza kwimarike yokubheja kwezemidlalo eUnited States, iBet365 ngumqhubi wokungcakaza omiselweyo ogqithisa ngokulula enye yezona ndawo zibalaseleyo ekubheja kuzo emhlabeni. Sele ibonakalisa ukuba iyintandokazi e-United States ngenxa yeempawu zayo ezibalaseleyo kunye nokufikeleleka kwayo, okuyenza ukuba ibeyindawo ekuyiwa kuyo kubo bobabini abaziqengqeleki abaphezulu kunye nabathengisi bezemidlalo abaqhelekileyo.
Ezinye zezibonelelo abathengi abanokujonga phambili kuzo xa bekhetha le ndawo zibandakanya:
Uluhlu oluninzi lweendlela zokubheja kwezemidlalo kunye neemarike.
Inkxaso ebalaseleyo kubathengi.
Ikhuselekile, inokuthenjwa, kwaye ikhawuleze idipozithi kunye nokukhetha.
Ibhonasi: I-100% ukuya kuthi ga kwi-500 yeedola kwiiKhredithi zeBet
Iincwadi zezemidlalo zaseMelika zase-101: Ngaba kusemthethweni ukubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi?
Ngomhla ka-Meyi u-2018, iNkundla ePhakamileyo yase-United States yavala i-PASPA, ngaloo ndlela iphakamisa ukuvalwa komdibaniso ngokubheja kwezemidlalo. Esi sigqibo sinikezele ngesigqibo somthetho sokumisela ukubheja kwezemidlalo kwilizwe ngalinye. Ke, ewe, ukubhejela ezemidlalo kusemthethweni eUnited States, kodwa oku akusebenzi kuwo onke amazwe njengoko abanye kusafuneka bangene ebhodini okanye basacinga ngemithetho yokubheja kwezemidlalo.
Ngokwendalo, oku kuthetha ukuba ukubheja kwezemidlalo kusemthethweni e-U.S., Kodwa akunakulungiswa kwimeko apho ubekwe khona.
Kuba esi sikhokelo simalunga nokukunceda ufumane ezona ndawo zibalaseleyo zokubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi, eyona nto sigxile kuyo kukwenza ukuba iincwadi ze-Intanethi zibhaliswe ngokusemthethweni. Oku kubandakanya iColorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia, West Virginia, California , kunye neWashington DC ekukuphela kwayo ekubheja kwi-Intanethi okwangoku yi-Intralot.
Amazwe amaninzi kunokwenzeka ukuba angene ebhodini ngo-2021 nangaphaya, ngenxa yokuba enenzuzo kakhulu kwicandelo lokubheja kwezemidlalo. Okwangoku, kuyakufuneka ubekho kula mazwe adwelisiweyo ukuba ufuna ukonwabela izibonelelo ezipheleleyo zokubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi kwiincwadi zezemidlalo ezinelayisensi ekuhlaleni.
Bona Okuninzi: UkuBheja kwezemidlalo ukuSebenza ngokusemthethweni
Yeyiphi incwadi yezemidlalo ekulungeleyo?
Nangona ukhetho lwendawo yokubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi ihlala iza kukhetho lomntu, oku akufuneki kuhlala kuyinto kuphela ojongeka kuyo xa ukhetha incwadi yezemidlalo. Ukuba ujonge amava amnandi kwaye ajikelezwe kakuhle, kukho ezinye izinto oya kuthi uzigcine engqondweni. Nazi ezinye zezona zibalulekileyo:
Iibhonasi, ukubheja simahla, kunye nokunyusa
Intengiso yokubheja kwezemidlalo igcwele kakhulu, ukutsho nje okuncinci, kwaye incwadi nganye yezemidlalo ekwi-Intanethi iya kusebenza nzima kakhulu ukutsala umdla wakho. Enye yeendlela abenza ngayo oku kukubonelela ngeebhonasi ezinomtsalane, ukubheja simahla kunye nokunyusa. Nokuba ingumbono wokufumana okuninzi kulo mvuzo unokuba uyathandeka, abathengi kufuneka baqhubeke ngokulumka.
Iibhonasi kunye nokwenyusa kunokubangela amava ongcakazo kakhulu, kodwa kuphela ukuba ziyilelwe ukuba zilungile. Ezona zilungileyo ziya kuba zezi zikhatshwa yimigaqo nemiqathango efanelekileyo. Oko kwathethi, iibhonasi ezinkulu azisoloko zihamba phambili kuba zinokuza neemfuno ezigqithisileyo zokuloba kunye nezinye iimeko ezingenangqondo.
Ngalo lonke ixesha jonga kwaye uthelekise izibonelelo ezininzi ukuze xa sele ukulungele, ungenza isigqibo unolwazi ongekhe uzisole ngalo kamva. Kwakhona, jonga iinkqubo zokunyaniseka, ngakumbi ukuba ungumbhexeshi wezemidlalo onamava, njengoko ezi zinokuhamba indlela ende ekongezeni ixabiso kumava akho okubheja kwezemidlalo.
Ukubeka kunye nokuKhetha ukuKhetha
Akukho nto isondeleyo kwimincili yokubheja kwimidlalo oyithandayo okanye kwiqela elinemali yokwenene. Nangona kunjalo, oku kungonakaliswa ngokulula kukusilela kwinkqubo yendawo yokugcina imali. I-sportsbook oyikhethileyo kufuneka ibaluleke kakhulu malunga nendlela ezisingatha ngayo zombini iidiphozithi kunye notsalo.
Indlela yokuqala yokumisela oku kukujonga inani lokuhlawula okanye lokubhaka ezihlanganisiweyo kwincwadi yezemidlalo. Ukuba nokukhetha ngakumbi kulo mba kuhlala kungcono kuba unokukhetha ezona uzithandayo. Izinketho ezikhoyo ziya kuhlala zihluka ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye, kodwa ukuba ulungile kwezo uzifumanayo, uya kuba ulungile.
Ngaphandle kwenani leenketho zokuhlawula ezikhoyo kwisiza osikhethileyo, incwadi yezemidlalo kufuneka ijonge zonke iibhokisi ezifanelekileyo malunga nokhuseleko, ukhuseleko kunye nesantya. Izinketho zokuhlawula ezinje ngeemali zedijithali, amakhadi etyala, kunye ne-e-wallets sele zikhuselekile kakhulu, kodwa isiza kufuneka siphumeze amanqaku ongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba imali yakho ifika kwindawo yabo ikhuselekile kwaye ngokukhawuleza.
Uluhlu lweeNketho zokuBheja kwezemidlalo
Esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abantu abaninzi betshintshela kwiincwadi zezemidlalo ezikwi-Intanethi kwaye bethengisa abathengisi beencwadi ngenxa yeentlobo ezikhoyo kwi-Intanethi. Uninzi lweencwadi zemidlalo ezisekwe kumhlaba zihlala zibonisa kuphela ezemidlalo, ezinokuhluka ngokuxhomekeka kwindawo ezikuyo. Imisebenzi yezemidlalo yamazwe aphesheya okanye engathandwa kakhulu ihlala ibekelwa ecaleni.
Oku akunjalo kwiindawo zokubheja ezemidlalo kwi-intanethi. Ayizizo zonke ezakhiwe ngendlela efanayo, nangona kunjalo. Kananjalo, uya kufuna incwadi yezemidlalo ekwi-intanethi egubungela imidlalo emininzi kangangoko. Ukuba nezi ntlobo zininzi kuthetha ukuba awunakukhathazeka malunga nokuphoswa lithuba lokonwabela isenzo esithile sokubheja kwezemidlalo, nokuba umdlalo owuthandayo ukwixesha lonyaka ongekhoyo.
Ngaphaya koko, iincwadi zemidlalo ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubheja kwezemidlalo zinika abathengi ithuba lokuphonononga nokuzama imisebenzi yezemidlalo abangazange bazame ngaphambili. Yindlela entle yokugcina ulonwabo luqhubeka unyaka wonke.
Ukhuphiswano kunye neMigca
Eyona njongo iphambili yabaninzi abangcakazayo kunye nabathengisi bezemidlalo abaqeqeshiweyo kukuphumelela imali kwiibhejethi zabo. Oko kwathethi, ukuba ufuna elona xabiso libalaseleyo okanye ibang yembabala yakho, ukufumana eyona nto ikhuphisana kakhulu kunye nemigca kubaluleke kakhulu. Nokuba umahluko omncinci kunokuba neempembelelo ezinkulu kumathuba okuphumelela okanye nokuba ungaphumelela kangakanani.
Uninzi lwabantu luhlala luwudlala lo mbandela, kwaye ngelixa ukufumana elona xabiso libalaseleyo kunokuba sisakhono esinzima sokwenza kakuhle, nokuba ulwazi oluncinci lungenza umohluko. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukuthenga ngeyona ndawo yokubheja ibalaseleyo yabadlali eMelika. Oku kuya kuhlala rhoqo kunokungabikho kwezona zinto zinengeniso kunye nemigca yakho.
Nje ukuba unciphise ezincwadini zemidlalo ezimbalwa, unokutshintsha phakathi kwazo njengotshintsho okanye uzithelekise kwaye ukhethe eyona ikuthandayo. Khawukhumbule nje ukuba ekubheja kwezemidlalo, yonke ipenki elahlekileyo okanye ephumeleleyo ihlala idibanisa.
Isixhobo soBhejo soMsebenzisi-ongumhlobo
Amava omsebenzisi yinto ebaluleke kakhulu ekubheja kwezemidlalo kwi-Intanethi, kwaye uninzi lwezona ncwadi zemidlalo zibalaseleyo zenza konke ezinako ukuqinisekisa ukuba banodumo olukhulu malunga noku. Akukho mntu ufuna ukubambeka ngelixa bezama ukubheja okanye xa uhambahamba ngayo nayiphi na indawo, eyenza ukukhetha indawo efanelekileyo kubaluleke kakhulu.
Ezinye izinto ezinje ngokuhambelana kwesixhobo zinokudlala kuba zininzi izixhobo ezisebenza nge-intanethi ezijikelezayo. Ngombulelo, ezona ndawo zibalaseleyo zokubheja kwezemidlalo zityale imali kuyilo oluphendulayo oluya kusebenza malunga nayo nayiphi na i-smartphone yanamhlanje, ithebhulethi, ilaptop, okanye i-desktop.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ubeko lwesiza kunye nemixholo ekhethiweyo okanye izikimu zemibala ziyakutsala ngaphambi kokuba ungene.
Njengokuba ukubheja kwezemidlalo kunokuba yinto emnandi kwaye inomdla, ngamanye amaxesha unokufuna ukuzama enye into. Ke, ukuba ufuna ukuthatha ikhefu ekubhejeni ezemidlalo kwi-Intanethi kodwa usafuna ukonwabela isenzo esithile sokungcakaza, kuya kufuneka uzame ezinye iintlobo zongcakazo endaweni yoko.
Ezona ndawo zibalaseleyo zokubheja kwezemidlalo nazo ziyenzeka ukuba zezinye zezona ndawo zibalaseleyo zokungcakaza kwi-Intanethi ezikhoyo. Amathuba kukuba ukuba ufumene i-casino e-intanethi emangalisayo, uya kuba ukhetha i-casino enkulu kwi-intanethi, i-casino ehlala kunye negumbi le-poker. Ukwenza ngcono nangakumbi, ezona ndawo zibalaseleyo ziya kwenza ukuba abathengi bazonwabele zonke ezo mveliso zimangalisayo zisebenzisa iakhawunti yekhasino efanayo kunye nebhanki. Yintoni enye onokuyicela?
Ezinye izinto ezibonakalayo ukuba ababhejeli bezemidlalo kufuneka babeke iliso ngaphandle kubandakanya ukuthembeka okanye ukuchaneka kweenkonzo zenkxaso yabathengi, udumo ngokubanzi, uphononongo lomsebenzisi, ukungafihli, izinto ezihlangeneyo zokhuseleko, ulawulo lokungcakaza olunoxanduva kunye nokunika ilayisensi kunye nolwazi ngemithetho.
Iindawo eziBalaseleyo zokuBheja ngezeMidlalo
Iiveki ezili-17 zexesha le-NFL eliqhelekileyo lixesha elifanelekileyo lokubheja kwimidlalo yeligi. Iqela ngalinye licwangciselwe ukudlala imidlalo eli-16 phakathi ngasekupheleni kukaJulayi nasekuqaleni kukaFebruwari- la maxesha, ke ngoko, ahlala ebandakanya izinto ezininzi zokubheja kwiincwadi zezemidlalo ezisekwe kumhlaba nakwiindawo zokubheja ezemidlalo kwi-Intanethi. Lilonke, kukho iiveki ezingama-22 zesenzo seNFL ukusukela ekuqaleni komdlalo wokuqala, ukuya ezantsi kwiSuper Bowl.
MyBookie Ngokuqinisekileyo yeyona ndawo yokubheja ikwi-intanethi kubalandeli beNFL okoko ibonelela ngeendlela ezininzi zokubheja, kubandakanya ikamva, iiplagi, ukubheja kumdlalo weqonga, kunye nokusasazeka kwenqaku, phakathi kwabanye. Kuyenzeka ukuba ubonise ezinye zeentlawulo ezikhawulezayo kushishino. IBovada lukhetho olukhulu.
Ukubheja kwe-NBA basketball
Umbutho weSizwe weBhola yeBhasikithi (i-NBA) uhlala uqhuba iinyanga ezi-6 zizonke, kwaye ngeli xesha, kudlalwa imidlalo engama-82. Iqela ngalinye liza kudlala malunga nemidlalo emithathu. Ukuba ufuna ukubheja kule midlalo, ixesha eliqhelekileyo liza kuhlala liqala ngo-Okthobha kwaye liphele ngamanye amaxesha ngo-Epreli. Oku kulandelwa kukhuphiswano lwePlayoff, oluhlala luphela ngoMeyi kwaye lulandelwe yimidlalo yokugqibela eya kuhlala iqhuba phakathi koMeyi noJuni.
Nawaphi na abalandeli bezemidlalo abafuna eyona migangatho yokubheja ye-NBA ikhuphisana nayo, MyBookie yindawo entle yokuqala. Uya kuqinisekiswa ngokufumana ukufikelela kwamanye amanqaku amaninzi kunye neenketho zokubheja. Olu dityaniso lweendlela ezinobunyani kunye neendlela ezahlukeneyo zokubheja zincediswa ziibhonasi ezibalaseleyo kunye nenkqubo eyomeleleyo kakhulu yokufumana imali.
Ukubheja basketball yasekholejini
I-basketball yaseKholeji e-United States ilawulwa nguMbutho weSizwe weeMbaleki (NCAA). Ixesha layo liqala ngokusesikweni phakathi ku-Okthobha okanye ekuqaleni kuka-Novemba, kunye nemidlalo yeNkomfa eqala ngoDisemba ukuya ngasekupheleni kukaFebruwari. Oku kukhokelela ku-Matshi Madness, edla ngokuba lelona xesha lilungileyo kubabhejeli bezemidlalo abangabalandeli bebhasikithi yasekholejini.
Ukubheja kwezemidlalo ekholejini, akukho ndawo ingcono yokubheja kunokuba UyiloKings . Apha unokufumana uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ekubheja ngokungagungqiyo, enye imigca, kunye nezixhaso. Ukongeza koku, iingxaki ekubonelelwa ngazo kwezemidlalo kwi-Intanethi zikhuphisana kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iincwadi zezemidlalo.
Ukubheja ibhola ekholejini
Ixesha lebhola ekhatywayo lasekholejini lihlala liqala ngempelaveki yoSuku lwaBasebenzi kwaye libaleke kude kube nguJanuwari kwangoko. Ixesha eliqhelekileyo eliqhelekileyo liqala kwiveki enye emva kwemidlalo yobuntshatsheli yenkomfa kwaye igqitywe kwimpelaveki yokuqala kaDisemba. Lilonke, ibhola ekholejini yesiqhelo yexesha eliqhelekileyo liqhuba iiveki ezili-13. La ngawona maxesha mahle ukuba ufuna ukubheja kwimidlalo.
Bovada unikezela abathengi bebhola ekholejini amava amahle kunye neebhonasi ezifanelekileyo kunye nokunyuselwa okuya kubagcina bebuyela ngaphezulu. Ngoluhlu olubanzi lweendlela zokubheja kunye nokukhuphisana okunokwenzeka, awuyi kuba nasizathu sokuba ujonge kwenye indawo.
Ukubheja kwe-MLB baseball
Ixesha eliqhelekileyo leMajor League Baseball (MLB) ihlala iqhuba ukusuka ngasekupheleni kuka-Matshi okanye ekuqaleni kuka-Epreli ukuya ngasekupheleni kukaSeptemba okanye ekuqaleni kuka-Okthobha. Oku kulingana nentwana engaphantsi kweeveki ezingama-27, apho kudlalwa imidlalo eli-162 iyonke.
Ukuba ufuna i-MLB baseball yamava amnandi, ngokuqinisekileyo ngekhe uhambe gwenxa Bovada . Isiza sele sizakhele igama ngokunikezela ngokukhuphisana kakhulu kwimidlalo ye-baseball ngexesha lamaxesha onyaka, kwaye awunakulindela nto imfutshane ngexesha lonyaka elizayo. UyiloKings kwaye Ukubheja365 kufanelekile ukuba ujonge.
Ukubheja i-NHL hockey
Ixesha eliqhelekileyo leNational Hockey League (NHL) ihlala iqala ngo-Okthobha ukuya ku-Epreli. Oku kulandelwa yiNdebe yeStanley eqala phakathi ku-Epreli ukuya kuJuni. Eli lixesha elingaphezulu kwelaneleyo labathengi ukuba badlwengule kwisenzo esithile sokubheja njengoko ishedyuli yomdlalo wama-82 idlala.
MyBookie Ngokuqinisekileyo yeyona ncwadi yezemidlalo ikwi-Intanethi yokubheja kwimidlalo yeNHL. Ayisiyiyo kuphela into entle ehloniphekileyo, kodwa indawo iyenzeka ukubonelela ngeempawu ezintle kubo bonke abathengi bayo. Oku kubandakanya uluhlu olubanzi lweendlela zokubheja kunye neebhonasi kunye nokukhuthaza ukugcina wonke umntu onwabile.
Eyona mibuzo iqhelekileyo yeencwadi ezikwezemidlalo ezikwi-Intanethi
Ngaba ukubheja kwezemidlalo kusemthethweni eMelika?
Ewe, ukubheja kwezemidlalo kusemthethweni eUnited States, kwaye oku akunjalo kuzo zonke iindawo zelizwe, uninzi lwamazwe lusemthethweni kwaye lilawula lo msebenzi ukusukela oko yapheliswa iPASPA emva phakathi ku-2018.
Uphi ukubheja kwezemidlalo ngokusemthethweni eMelika?
Ukubheja kwezemidlalo eUnited States kusemthethweni kwezi ndawo zilandelayo: IArkansas, iColorado, iDelaware, iIllinois, iIndiana, iIowa, iMichigan, iMississippi, iMontana, iNevada, iNew Hampshire, iNew Jersey, iNew Mexico, iNew York, iOregon, iPennsylvania, iRhode Isiqithi, iWashington, DC, kunye neWest Virginia.
Ngaba iincwadi zemidlalo ezikwi-Intanethi zibhatalwa eMelika?
Ewe, iisayithi zokubheja ezemidlalo kwi-Intanethi eMelika zihlawula iimali zabadlali. Qiniseka nje ukuba indawo odlala kuyo inesidima.
Yeyiphi eyona ncwadi yezemidlalo ikwi-Intanethi yabadlali baseMelika ngo-2021?
Eyona ncwadi yezemidlalo ibalaseleyo yabadlali eUnited States yeyona itshekisha zonke iibhokisi ezifanelekileyo malunga noko kufunwa ngabadlali kunye neempawu ezisemgangathweni kunye nemizekelo emihle yoku kubandakanya Bovada , MyBookie , UyiloKings & Ukubheja365 .
Zeziphi iincwadi zemidlalo ezikwi-Intanethi ezamkela iPayPal eMelika?
Ezinye zeencwadi zemidlalo ezikwi-Intanethi ezivumela abathengi bazo ukuba basebenzise i-PayPal njengendlela yokubhatala kubandakanya UyiloKings , Ukubetha , kunye Ukubheja365 .
Dibana noMzala ka-Blair Waldorf waseMexico: I-Gossip Girl Empire Goes South ye-Border
Iiprobiotic zeBhalansi ye-pH yaBasetyhini
Ngaba kufanelekile ukuba iDisney ikhathazeke malunga ne'Jedi yokugqibela 'yeOfisi enkulu yeBhokisi yeDrop?
Ukulahleka kwe-Ex-Yahoo CEO u-Marissa Mayer ubuyela kwi-Tech Scene nge-Surge Venture
moma ps1 ipati yehalloween ka-2016
iimfazwe zenkwenkwezi uhlahlo-lwabiwo mali lwejedi lokugqibela
indlela yokunxibelelana namandla akho engqondo
iipilisi ezizokukwenza unciphise umzimba
Indoda yokugqibela emhlabeni kumdlalo we-tv